Ny Tetikady “Vahiny Fahavalo” Mahazatra an’i Meksika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Avrily 2017 4:30 GMT
Ny sisintany manelanelana an'i Etazonia sy Meksika . SARY: Sehatra ho an'ny daholobe tao amin'ny Pixabay.
Misy andalana ao amin'ny hiram-pirenena Meksikana izay milentika lalina ho fahatsiarovana ao an-tsain'ireo Meksikana an-tapitrisany, ary raha ho ahy dia anarana azo omena tsara ny fanodinkodinana ny vaovao ataon'ny governemanta Meksikana izany. Toy izao ny fandehany :
Fa raha misy vahiny fahavalo sahy manazimbazimba ny taninao amin'ny faladiany/Saino, ô ry Tanindrazana malala , fa ny lanitra no nanome anao miaramila ho an'ny zanakao tsirairay!
Saro-takarina ho an'ny Meksikana maro ireo teny ao amin'ny Hiram-pirenenay. Olona an-tapitrisany no manafangaro ny “mas si osare”, ny teny telo voalohany ao amin'ny andalana, amin'ny teny “Masiosare”, izay mieritreritra izany ho anaran'ny mpanafika izay tsy maintsy horoahina dia ny “fahavalo vahiny.” Mino aho fa natao ho an'ireo olona ireo ny tetika fampielezan-kevitra izay vitan'ny governemanta omana tsy misy lesoka.
Miresaka aho, mazava ho azy, momba ny fihetsika maromaro izay natao hiampangana ny hevitry ny olona. Mihodikodina eo amin'ny fandresen-dahatra ny vahoaka ireo fihetsika ireo fa tsy misy na inona na inona intsony azo angatahana amin'ny governemanta Meksikana— na ny marimarina kokoa, avy any amin'ny fitondrana Peña— ho amin'ny enin-taona sisa ambiny hitondrany ankehitriny ary hifarana amin'ny volana Novambra 2018.
Tsy sarotra ny mahita ilay “fahavalo vahiny”. Ilay lahiantitra verivery saina zarazara hoditra maharitra sy manana volo lokom-bolamena izay zara raha manafina ireo volo fotsy ankehitriny no ilay olon-dozabe tena ankafizin'ny tontolo tandrefana. Ilay lehilahy izay tsy hafa fa ilay tompon'ny Trano Fotsy sady mpitarika ny governemantan'ny Etazonia ao Amerika.
Tonga niaraka tamin'ny fitsaboana mahatohina, niampy volana maromaro tamin'ny fanamafisana ny lahateny fampikoropahana tany Etazonia talohan'ny fifidianana tamin'ny 8 Novambra 2016 ny tetikady talohan'ny nandefasana izany ho an'izay tokony hiantefany. Efa nisy vokany sahady ny fitsaboana rehefa ankatoky ny fifidianana : nanaiky ny handoa vola bebe kokoa ireo nahazo ny fitsaboana (izany hoe, ny ankamaroan'ny Meksikana), rehefa nanakalo ny pesos ho dolara, sy nanao veloma ny herijikany hahazoany ny “revirevy Amerikana “, ary ny fiatrehana ny krizy ara-toekarena iray hafa izay efa naverimberin'ny Antokon'ny Andrim-panjakana Revolisionera—ny antokon'i Enrique Peña—imbetsaka nandritra ny taonjato farany.
Ary ny meloka tompon'andraikitra tamin'ireo olan'ny Meksikana rehetra ireo ve? Ilay mpanao didy jadona, ilay mpitondra masiaka avy atsy ankilan'ny sisintany atsy! Ary ahoana ny aty amin'ny faritra Meksikana? Hisy ve ny olona hanontany fa ny Filoha Peña, i Luis Videgaray Sekreteran'ny Raharaham-bahiny, i José Meade sady Sekreteran'ny Vola no Sekreteran'ny Tetibola-panjakana, sy ireo ekipany no tompon'andraikitra noho ny tsy fahombiazana tamin'ny “fanokafana ny lalana”, sy namela an'i Meksika ho eo ampelatanan'ny olon-dozabe ?
Ary ahoana ny momba ny mpitondra teo alohany? Inona no nataon ‘izy ireo mba hisorohana ireo Meksikana tsy hifindra monina ho any Etazonia, satria tsy nanana, ary mbola tsy manana, fanantenana ny hiaina fiainana mendrika ao an-tokantranony izy ireo ? Moa ve izy ireo hotazonina ho tompon'andraikitra amin'izany, noho ny tsy fahaizany nanangana fanjakana izay miantoka ny zo fototra ho an'ireo izay mahatsiaro ho voatery hiampita ny sisintany ho any Avaratra?
Nanana ny fahavitrihana ny handeha ho any Etazonia ny mpitondra sasany, toy ny governora teo aloha Graco Ramírez na ny Sekreteran'ny Raharaham-Bahiny Jorge Castañeda, ary nilaza tamin'ireo Meksikana, izay nahita fa ilaina ny fifindra monina fa hanohana azy ireo ny fireneny. Ahoana marina moa raha toa ka tsy miraharaha azy ireo ny fireneny ka nahatonga azy ireo handao? Ankoatra izany, ahoana raha tsy liana amin'ny fiverenana ao Meksika ny mpifindra-monina, fa maniry kosa ny hijanona any amin'ny toerana izay takian'izy ireo ho fonenany ankehitriny. Moa ve omenao tsiny izy ireo noho izany?
Miaraka amin'ny firongatry ny “fahavalo vahiny”, hadino ireo “tsy hafa firenena “—ireo Meksikana tsotra—ary malaza ho mpanambola be toy ny governora teo aloha Duarte sy ireo izay namela azy handositra, ary koa ny olona rehetra izay maniry ny hanavotra ny rafi-pitsarana mpanao kolikoly sy mohaka ary tsy nahomby tamin'ny fanerena ireo mpanao heloka bevava mba hanefa ny helony.
Nefa amin'izao fotoana izao, tsy milaza ireo olona ireo ho mpanao mari-tranon'ny fahoriana izay hiainan'izy ireo ny vahoaka, mieritreritra olon-kafa izy ire , dia ireo hafa izay saika tsy voakasiky ny rafitra fanaraha-maso ao amin'ny firenena. Mahazatra, sa tsy izany?
Ka noho izany, sahy aho manasa ireo Meksikana mpamaky mba hanohy indrindra ny fikaroham-baovao amin'ny alalan'ny fampitam-baovao tsy miankina raha nanoratra ity lahatsoratra ity. Mba hanairana sy hanampiana ireo hiantefan'ny fampielezan-kevitra mampalahelo sy hampifantoka ny ezaka ataony amin'ny antso ho an'ny governemanta tsara kokoa aty amin'ny sisintaniny amin'ny alalan'ny fomba ara-dalàna rehetra misy.
Ny lahatsoratra voalohany amin'ny teny espaniola dia nivoaka tao amin'ny Mexican Times.